ကိုဗစ်_၁၉_ရဲ့_Delta_မျိုးစိတ်အသစ်မှာ_မတူညီတဲ့_ရောဂါလက္ခဏာများ_ရှိပါသလား??? - OSC Hospital
By: OSC User
On: Monday July 26th, 2021
In: New (Corona Update)
ကိုဗစ်ရောဂါက အနံ့၊ အရသာ ပျောက်ခြင်းကဲ့သို့ ရောဂါလက္ခဏာများနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Delta မျိုးစိတ်က ယခုအခါမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ပြန့်နှံ့နေပါပြီ။ ရောဂါလက္ခဏာများက အတူတူပဲလား။
အတွေ့များဆုံး ရောဂါလက္ခဏာများက ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အနံ့ပျောက်ခြင်းနှင့် အရသာပျောက်ဆုံးခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြပေမယ့် Delta ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်က ချောင်းဆိုးခြင်းကို အများဆုံး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
ယခုအခါမှာ အတွေ့များဆုံး လက္ခဏာရပ်များမှာ…
-နှာစေးခြင်းနှင့် နှာချေခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအများစုက သူတို့အအေးမိတယ်လို့ပဲ မှားယွင်းပြီး မှတ်ယူတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် အခြားသူတွေဆီကို ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကူးစက်ပြန့်နှံ့သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Delta ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်က Alpha မျိုးစိတ်ထက် (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း ပိုကူးစက်လွယ်ပါတယ်။ ဒီမျိုးစိတ်အသစ်က တစ်ချို့လူတွေအတွက် အအေးမိဖျားနာလောက်သာ ဖြစ်နေပေမယ့် တစ်ချို့သူများအတွက်တော့ သေစေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ပြင်းထန်ပါတယ်။
အအေးမိဖျားနာ လက္ခဏာများ ဖြစ်နေလျှင် သီးသန့်ခွဲနေပြီး ကိုဗစ်၁၉ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများက သိပ်မပြင်းထန်လျှင်တောင် တစ်ချို့သူများအတွက် ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးများက ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးခြင်း
မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သော်လည်း လူတိုင်းကာကွယ်ဆေးကို မထိုးနိုင်သေးပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးများက ကိုဗစ်၁၉ ရဲ့ တခြားသော မျိုးစိတ်များနှင့် ယှဉ်လျှင် Delta မျိုးစိတ်ကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အာနိသင်နည်းပါးပါတယ်။
ဒီမျိုးစိတ်ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများကို ခံစားနေရသူများက စစ်ဆေးကြည့်ပြီး အခြားသူများထံ ရောဂါပိုးကို မဖြန့်မိစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
related articles (ဒါလေးတွေလည်းဆက်ဖတ်ပေးပါ)
ကပ်ဆိုးကာလအစောပိုင်းမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်မခံရစေဖို့ နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားဖို့ ပြောကြားထားကြပါတယ်။ နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ခြင်းက တပ်ဆင်ထားသူများကိုသာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်မဟုတ်ဘဲ ဘေးနားရှိလူများကိုပါကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားခြင်းက ကိုဗစ်ကူးစက်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးပြီး ဆေးရုံတက်ရောက်ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းတို့ကိုလည်း နည်းပါးစေနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။လက္ခဏာမပြခင်မှာ နှာခေါင်းစည်းများ ကြိုတင်ဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုလျှင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူးစက်နိုင်ချေလျော့ကျသွားပါတယ်။နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ခြင်းက ယခင်က မိမိရောဂါကိုအခြားသူများကို ...
ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ
ကိုဗစ်၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်က ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။သူတို့က ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရလျှင် ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်များနိုင်တာကို ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာရှင်များက သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါသည်များက ဖျားနာသူများနှင့်ဝေးဝေးနေပြီး လက်ဆေးခြင်း၊ နှာခေါင်းစည်းတပ်ခြင်း စသည်တို့ကို ပိုမိုပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ကိုဗစ်၁၉ ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများက ပိုပြီးတော့ ...
ကိုဗစ်ရောဂါက အနံ့၊ အရသာ ပျောက်ခြင်းကဲ့သို့ ရောဂါလက္ခဏာများနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Delta မျိုးစိတ်က ယခုအခါမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ပြန့်နှံ့နေပါပြီ။ ရောဂါလက္ခဏာများက အတူတူပဲလား။ အတွေ့များဆုံး ရောဂါလက္ခဏာများက ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အနံ့ပျောက်ခြင်းနှင့် အရသာပျောက်ဆုံးခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြပေမယ့် Delta ...
Previous Post: Niacinamideဆိုတာဘာလဲ?
Next Post: ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ